Ithegi: Ukucingela | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 17, 2021 NgoLwesithathu, Matshi 17, 2021 Douglas Karr
I-LinkedIn yinethiwekhi yoluntu ephezulu yeengcali ze-B2B emhlabeni kwaye, ngokuqinisekileyo, lelona jelo libalaseleyo labathengisi be-B2B ukusasaza nokukhuthaza umxholo. I-LinkedIn ngoku inamalungu angaphezu kwesiqingatha sezigidi, ngaphezulu kwe-60 yezigidi zabaphembeleli abakwinqanaba eliphezulu. Alithandabuzeki elokuba umthengi wakho olandelayo uku-LinkedIn… yinto nje yokuba ubafumana njani, unxibelelana nabo, kwaye ubonelele ngolwazi olwaneleyo ababona ixabiso kwimveliso okanye kwinkonzo yakho. Intengiso
i-vidREACH: Iqonga le-imeyile yeVidiyo yokuCinga ngokuKhangela
NgoMgqibelo, Matshi 28, 2020 NgeCawa, ngoMatshi 29, 2020 USean Gordon
Ukuveliswa kokukhokela luxanduva oluphambili kumaqela entengiso. Bajolise ekufumaneni, ekubandakanyeni nasekuguqukeni abaphulaphuli ekujoliswe kubo babe ngamathemba anokuba ngabathengi. Kubalulekile kwishishini ukwenza isicwangciso sentengiso esiphembelela ukwenziwa kwesikhokelo. Ukukhanya koku, iingcali zentengiso zihlala zikhangela iindlela ezintsha zokuma, ngakumbi kwihlabathi elihlala ligcwele ngaphezulu. Uninzi lwabathengisi be-B2B bajikela kwi-imeyile, bayijonga njengolona lawulo lusebenzayo
Iindlela ezi-8 zokuphucula ukuSebenza ngokuSebenza ngokukuko
NgoLwesithathu, Aprili 12, 2017 NgoLwesine, Aprili 13, 2017 Douglas Karr
Ngale njikalanga, bendikhwele ibhayisekile kunye nogxa wam naphakathi kwamahlombe kunye nokukhukhumeza besixubusha ngeendlela zethu zokuthengisa kumashishini ethu. Sobabini savuma ngokupheleleyo ukuba ukunqongophala kwengqeqesho esiyisebenzisileyo kwintengiso yethu kuthintela zombini iinkampani zethu. Imveliso yakhe yesoftware inomtsalane kumzi-mveliso othile kunye nobungakanani, ke yena wayesele elazi ukuba ngubani ithemba lakhe. Ishishini lam lincinci, kodwa sigxile kakhulu kwizinto ezithile
NgoLwesibini, Januwari 19, 2016 NgoLwesibini, Januwari 19, 2016 UJenn Lisak Golding
Okwangoku, umlo wemfazwe phakathi kweNtengiso kunye neNtengiso usongela uguquko, imveliso kunye nokuziphatha kwimibutho emininzi yentengiso- mhlawumbi yeyakho, nkqu neyakho. Ngaba awuqinisekanga ukuba oku kuyasebenza kuwe? Cinga ngale mibuzo kumbutho wakho: Ngubani ophethe eyiphi inxenye yohambo lokuthengisa? Yintoni eyenza ukukhokela okufanelekileyo? Kukuthini ukuqhubela phambili okunengqiqo komthengi okhokelayo-oguqukayo? Ukuba awukwazi ukuphendula le mibuzo ngokucacileyo, ukuzithemba kunye nesivumelwano phakathi kweNtengiso kunye neNtengiso,